Kordhinta saameynta barafka ee subaxdii ayaa sidoo kale saameysay duullimaadyada metrobus. | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulSaacadaha subaxda, saameynta barafka ayaa sii kordhisay saameynta ay ku leedahay duullimaadka matoorka.
01 / 02 / 2012 34 Istanbul, DUNIDA, GUUD, Headline, TURKEY
Saacadaha subaxda, saameynta barafka ayaa sii kordhisay saameynta ay ku leedahay duullimaadka matoorka. Duulimaadyada Metrobus ee udhaxeeya Avcilar iyo Kucukcekmkmece ayaa la joojiyay sababtoo ah cirifka adag ee wadada Metrobus. Duulimaadyada Metrobus ee gobalka ayaa lagu xakameynayaa hab maamuus leh.
Barafku wuxuu saameyn xun ku yeelanayaa duulimaadka metrobus. Metrobusku waxay ku adkaatay in la hormariyo sababtoo ah khudradda udubdhexaadka ah ee u dhaxaysa Kucuklim iyo Sefaköy. Taas awgeed, xoogagga dhammaan duulimaadka metrobus ayaa saameeyay si xun.
Kooxaha degmooyinku waxay isku dayayaan inay furaan waddada BRT, halka dad badan oo muwaadiniinta ah ay doorteen inay ka baxaan Metrobus. Goobta ku taala gobolka waxay saameysay dhammaan duulimaadyada shidaalka iyo safaf dhaadheer ah oo ka dhacay joogsiyada.
Isha laga helay: TRT
Bolat wuxuu kor u qaadaa saameynta daadadka daadka ee nidaamka tareenka mastiff
Gubashada tareennada ee Paris saameyn ku yeelatay
Barafka Edirne Nafaqeeyay Nolosha
Duufaan culus ayaa saameeyay garoomada diyaaradaha Moscow
Qiimaha Guriyeynta ee Metrobus Haysata